စင်ကာပူရဲ့ မြို့ပြစီမံကိန်းက မြန်မာပြည်နဲ့ ဘာတွေ ကွာသွားသလဲ? --> Post Detail | Razzwire
Thursday . 23 January . 2020
စင်ကာပူရဲ့ မြို့ပြစီမံကိန်းက မြန်မာပြည်နဲ့ ဘာတွေ ကွာသွားသလဲ?
စင်္ကာပူ နိုင်ငံဟာ ရန်ကုန်တိုင်းလောက်ပဲကျယ်ဝန်းတယ်။ မြေနေရာရှားပါးလို့ မြန်မာ ထိုင်း မလေး အင်ဒို စတဲ့နိုင်ငံ တွေကနေ သဲ ဝယ်ပြီး ပင်လယ်ထဲကို မြေနေရာချဲ့နေရတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာ လူနေတိုက်ခန်းတွေကိုပဲ ဆောက်ဆောက်၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံ နဲ့ ရုံးအဆောက်အဦပဲ ဆောက်ဆောက် ဆောက်ချင်သလို ဆောက်လို့မရပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Green Plot Ratio အတိုင်း ဆောက်ရပါတယ်။
တိုက်ခန်းတွဲတွေအကြား သင့်တင့်တဲ့ ကွက်လပ်ရှိရသလို မြက်ခင်းကိုလည်း သတ်မှတ်တဲ့ဧရိယာအချိုးအတိုင်း ချန်လှပ် စိုက်ရပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်သက်သာအောင် သန့်ရှင်းရေး လွယ်ကူအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မြေနေရာလွတ်ကို မြက်ခင်းစိမ်း မထားပဲ ကွန်ကရိခင်းပြစ်မယ်၊ အုတ်ခင်းပြစ်မယ် ဆိုရင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ အဲဒီလိုခင်းလိုက်ရင် ရွာချလိုက်သမျှသောမိုးရေ တွေဟာ မြေကြီးအတွင်း စိမ့်ဝင်သွားစရာ နေရာကွက်လပ်မရှိတော့တဲ့အတွက် ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြက်ခင်းတွေစိုက်ထားတဲ့မြေကွက် လပ်တွေကို အဆောက်အဦးတွေအကြားအမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဧရိယာအချိုးအတိုင် ပါရပါ တယ်။ အဲဒါကို Green Plot Ratio လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို ရန်ကုန်မှာ(၈၈)နောက်ပိုင်းကနေ ဒီနေ့အထိ တိုက်ခန်းတွဲတွေ ဆောက်တယ်။ ဟော်တယ်တွေ ဆောက်တယ်။ အဆောက်အဦမျိုးစုံအောင်ဆောက်တယ်။ ဒီလိုဆောက်ရာမှာ မြေရှိသမျှ အကုန်ဆောက် ပြစ်တယ်။ အဆောက်အဦတွေက ကျပ်ညပ်နေတော့ လေကောင်းလေသန့် မရတဲ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းတာပါဖြစ်လာတယ်။
လေဝင်လေထွက်မကောင်းတော့ တိုက်ခန်းတွေမှာလှောင်ပိတ်ပြီး ပူအိုက်မှုဒဏ်ကိုပါခံစားနေ ကြရတယ်။ ဒါကိုပဲကြည့်ရင် စီမံခန့်ခွဲသူတွေ( အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုသူတွေ) မှာ မတူညီတဲ့ အရည်အချင်း၊ မတူညီတဲ့ ရှေ့ရေး မျှော်တွေးတတ်မှု၊ မတူညီတဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သား အတွက် ဦးစားပေး စဉ်းစာတတ်မှု ဆိုတာတွေ အလွန်ကွာခြား နေတာတွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြင်သင့်ပြီအော် နေတာဟာ ဒါမျိုးတွေကို အတုခိုးတတ်ဖို့ ကောင်းတာတွေယူ မကောင်းတာတွေ ပယ်တတ်ဖို့ပါ။ စင်္ကာပူရဲ့တိုက်ခန်းတွေအကြား ကွက်လပ်ထားပြီး တိုက်ခန်နေပြည်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ကွင်းတွေ၊ကလေးကစားကွင်းတွေ နေရာတိုင်းမှာထည့်ပေးထားတယ်။
ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ကွင်းနဲ့ ကလေးကစား ကွင်းတွေရဲ့ကြမ်းခင်းဟာ မြက်မဟုတ်သလို ကွန်ကရီခင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး။ မြေသားကိုပဲ အမာခံရအောင် ပြုလုပ်ပြီးမှ၊ ရာဘာအစိလေးတွေကို တွဲဆက်ခင်းထားတာပါ။ ဒီလိုခင်းရာမှာလည်း အရောင်စုံနဲ့ အလှပုံပါပေါ် အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ မိုးရွာပြီးရင်လဲမိုးရေဟာ ရာဘာစေ့လေးတွေကို့ ဖြတ်ပြီး ချက်ချင်းရေစိမ့်ဝင်သွားလို့ မိုးရေ တင်ကျန်တာမျိုးမရှိပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ တိုက်ခန်းရဲ့မြေညီထပ် တွေမှာ အိမ်ခန်းဖွဲ့ပြီး လူနေခွင့်ချထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အောက်ဆုံး မြေညီထပ်တွေမှာ အလွယ်တကူ နားနေလို့ရအောင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ စားပွဲနဲ့ကုလားထိုင်တွေလုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ချိုတိုက်ခန်းအောက်မှာတော့ နေ့ကလေး ထိန်းကျောင်းတွေ မူကြိုကျောင်းတွေ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုများအတွက် သီးသန့်နားနေခန်းတွေ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် တိုက်ခန်းအုပ်စုတစ်ခုစီ မှာ နယ်မြေခံ အမတ်( MP) တွေလာပြီး ရုံးထိုင်ဖို့ အခန်းလုပ်ပေးထားပြီး လာတွေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အခန်းရှေ့မှာ သက်တောင့်သက်သာထိုင်နိုင်ဖို့ကအစ ထိုင်ခုန်တွေထားပေးထားပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ သူတို့မဲ့ပေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ MP တွေကို သူတို့အခက်အခဲကအစ ပြောပြဆွေးနွေး ကြလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာက တိုက်ခန်းတွဲတွေဝန်းကျင်မှာ မြေကွက်လပ်မချန်ခဲ့ပဲကပ်ညပ် ဆောက်တဲ့ အပြင် မြေညီထပ်ကိုပါ အိမ်ခန်းဖွဲ့ပြီးလူနေခွင့် ပေးလိုက်တော့ မြေညီထပ်နေတဲ့သူတွေက လူ့သဘာဝအတိုင်းနေရာချဲ့ မြေနေရာကို ရသမျျှ ယူတော့ အတော်ကိုရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ် ကုန်တယ်။
တစ်ချိန်က ရန်ကင်းတိုက်ခန်းတွေ မင်းမနိုင် တိုက်ခန်းတွေ ဖဆပလ တိုက်ခန်းတွေဆောက်ခဲ့စဉ်က သင့်တင်မျှတတဲ့ မြေကွက်လပ်တွေချန်ထားပြီးဆောက်ခဲ့တာပါ။ စင်္ကာပူဟာ အဲဒီတိုက်ခန်းတွေကိုအတုခိုးခဲ့ တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့က လူ့သဘာဝ လောဘမသတ် တတ်မှုကိုကြည့်ပြီးမြေညီထပ်မှာအိမ်ခန်းမဖွဲ့ပေးခဲ့ဘူး။ တစ်ခြားအကျိုးရှိတာ ပြောင်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ရန်ကင်းကအစ မင်းမနိုင်အဆုံး တိုက်ခန်း မြေညီထပ်မှာနေသူတွေရဲ့ လောဘ မသတ်နိုင်တာ ကြောင့် အခုဆိုရင်တိုက်ခန်းတွေကြားမှာလူသွားလမ်းကျဉ်းကျဉ်းပဲကျန်တော့တာပါ။
ဒီလိုနမူနာကောင်းတွေရှိနေတာတောင် ဒီနေ့အထိ မြေညီထပ်ကိုအိမ်ခန်းဖွဲ့ပြီးလူနေခိုင်းတုန်း တိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုနဲ့တစ် ကပ်ဆောက်နေ ကြတုန်းဖြစ်နေတယ်။ မင်းဓမ္မလမ်းနဲ့ပါရမီလမ်းဒေါင့်က ပညာရေးဝန် ထမ်းတွေအတွက်ဆောက်တဲ့ အဆောက်အဦး တွေဆိုရင် ဒီဘက်တိုက်က အီးပေါက်တာ ဟိုဘက်တိုက်က ကြားလောက်အောင်ကပ်နေတာကို မင်းဓမ္မလမ်းပေါ်ကကြည့်ရင်တွေ့နေရ တယ်။
နေပြည်တော် ဆိုပြီးမြို့သစ်ကြီးဆောက်တယ်။ အောက်ထပ်မှာအိမ်ခန်းဖွဲ့ထားတယ်။ တိုက်ခန်းတွဲကလူတွေ နားနားနေနေထိုင်စရာစကားပြောစရာနေရာမရှိဘူး။ အစီအမံ တစ်ခုကို ရေရှည်မျှော်တွေးပြီး လုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။ မြေရှားပါးတဲ့စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံတောင် လူတွေရဲ့ လောဘတက်မှုကြောင့် ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကို ကြိုတင်ရှင်းလင်တဲ့ အနေနဲ့မြေညီထပ်တွေမှာ အခန်းမဖွဲ့ပေးဘူး။ ဖွဲ့ခွင့်လည်းမပြုဘူး။ ပြီးတော့မှတိုက်ခန်းနေပြည်သူတိုင်းအတွက် လုံလောက်တဲ့ Car Parking ထည့်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားထားရင်တော့ တလ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး အခွန်ပြန်ကောက် တယ်။
ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူနေတိုက်ခန်းတွေကို ကပ်မဆောက်ပဲ ကွက်လပ်ချန်ပေးကြပါ လား။ ပြီးတော့ မြေညီထပ်တွေကိုလည်း လွှတ်ထားပြီး နားနေလို့ရအောင် ကလေးထိန်းကျောင်းလေးတွေက အစဖွင့်လို့ရ အောင်လုပ်ကြစေချင်တယ်။ စင်္ကာပူရောက်တုန်းခဏ အတုယုစရာလေးတေ တွေ့လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်း(သတ္တုတွင်း)
မန္တလေးတမြို့လုံးကို ညဖက်မှာ လှည့်ပတ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မြို့စောင့်တစ္ဆေကြီး ထိပ်တင်ကြီး
၅ နှစ်အရစ်ကျ ကားဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရှံးမလဲ?
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်သော လူပြည် ( မနုဿဘုံ ) မှ ကျွန်းကြီး ( ၄ ) ကျွန်း အကြောင်း